Qaar ka mid ah Xildhibaanda u sharaxan Booskii Wasiir Siraaji oo walaac kamuujiyay – Kismaayo24 News Agency
Qaar ka mid ah Xildhibaanda u sharaxan Booskii Wasiir Siraaji oo walaac kamuujiyay
Maqaalo Maqaalo iyo Warar Somali News Top News Xulashada K24 XULASHADA TODOBAADKA
by gurey 12th February 2018 067
Qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kursigii xildhibaanimo ee uu ka geeriyooday alle ha u naxariistee Cabaas Siraaji ayaa walaac ka muujiyay habka loo soo xulay ergada doorashada.
Xubnaha u tartamaya oo tiradoodu gaareyso 3 ayaa walaac ka muujiyay ergo aan la isla afgaran oo loo xareeyay mid ka mid ah xubnaha tartamaya, waxaana si gaar ah xubnaha ay walaac uga muuiyeen guddiga doorashada dadban oo iyagu u xaglinaya xubin ka mid ah tartamayaasha.
Sidoo kale, odayaasha iyo ugaasyada jufada Hubeer ee Digil iyo Mirifle ayaa sheegay in aan wax talo ah laga gelin soo xulista ergada doorashada, waxayna ku eedeeyeen guddiga doorashada ee ay maxda u tahay Xaliimo yareey in ergo aan la isla garan oo aysan soo gudbin odayaasha beesha ay xareeyeen. Maamulka Jubbaland ayaa wada xiriiro kala duwan oo ay la sameynayaan guddiga doorashada iyaga oo ka dalbaday in ergooyinka doorashada la saxo isla markaana aan doorashada la qaban inta isla ogolaanayo lana saxayo khaladaadka jira.
Dad xog ogaal ah ayaa sheegaya in doorashada kursigan ay farogelin ku hayaan xubno ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya, kuwaasoo doonaya in shaqsi ka mid ah xubnaha tartamaya ay si musuq maasuq ah ugu soo saaraan, waxayna odayaashu ka walaacsan yihiin lacago la sheegay in laga soo diray madaxtooyada qaab laaluush ah loo siiyo ergooyinka. Warar kale oo aanu ka helnay ilo xog ogaal ah ayaa xajiininaya in wasiirka howlaha Guud iyo Dib u dhiska,Eng Saadiq Cabdullaahi Cabdi, ay xubno ka tirsan madaxtooyada u soo bandhigeen inuu isaga haro tartanka kursigan ayna u ballan qaadeen kharash, taasoo uu ku gacan seyray.
Sidoo kale xubnahan ka tirsan madaxtooyada ayaa ka dalbaday guddiga doorashada in laga reebo tartanka Wasiirka howlaha guud Saadaq Maxamed iyada oo la doonayo in shir jaraa’id ay qabato guddoomiye Xaliimo Yareey kuna sheegto in kursigan ay u tartami doonaan 2 musharax oo kaliya Wasiir Eng Saadiq Cabdullaahi Cabdi, oo ah musharaxa saddexaadna uu waqtiga is diiwaangelinta ka dhacay, maadaama laga cabsi qabo inuu ku soo boxo tartanka.
Arrintan ayaa shaki weyn gelineysa dhex dhexaadnimada guddiga doorashada ee ay maxda u tahay Xaliimo Yareey, taasoo laga sugayo in dalka ay gaarsiiyaan doorasho loo dhan yahay oo ku saleyaan hal qof iyo hal cod.
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda DFS oo Turkiga kula kulmay Wasiirka Arrimaha dibadda Turkiga
AKHRISO: Bayaan ka soo baxay Beesha Caalamka oo looga hadlay Shirkii Golaha Amniga Qaranka ay Muqdisho ku yeesheen
Afhayeenka Xukuumada dalka Itobiya Somaliland iyo Puntland waxaan u aqoon sanahey Maamulo Somaliya ka mid ah.
admin 29th May 2019
Warar dheeraad ah: Magaalada Muqdisho qeybo kamid ah oo Xalay ay ka dhaceen Dilal aad looga naxay Yaase la dilay ??
U Gaar Ah K24 Sawiro Hordhac ah Xaflada qardho